Coq au Vin (Ọkụkọ na Red Wine Sauce) - Ezi Ntụziaka
kedu ihe ị ga - eme na kandụl ochie
ọdịiche dị n'etiti spaghetti na marinara ihendori
1 iko osikapa esi nri iji sie
Dị mfe ime, Coq au Vin bụ nri French nke nwere ọkụkọ na veggies a gbanyere na mmanya mmanya na-atọ ụtọ.
Ejila aha a ghọgbuo gị, efere a dị mfe n'ezie ma mgbe ọ na-ewe oge, ọtụtụ n'ime ya na-eji aka mgbe efere ahụ na-eme ọkụ! O zuru oke maka nri abalị ma ọ bụ ọbụlagodi oge pụrụ iche!
Gịnị bụ Coq au Vin?
Coq au Vin bụ nri ndị France nke nwere obere okuko na ọkụkọ nwayọ (braised) n’ime mmanya, anụ ezi, ero, na galik.
Braising pụtara na efere dị nchara (dị ka anụ ọkụkọ na nhazi a) wee jiri nwayọ sie na mmiri mmiri (mmanya ihendori).
Mgbe m chere echiche banyere nri a n’ezie, m na-aga Julia Child’s Coq au Vin ma ọ fọrọ nke nta ka m nụ ka ọ na-agagharị m site na nhazi. Ọ bụ ezie na ntụzịaka a na-esote usoro esi achọta na Akwụkwọ Julia (nke dịkwa nnọọ yiri uzommeputa na Ọyụ nke Isi nri ) M ubé mfe usoro (na Efrata).
Ọtụtụ mgbe, Coq au Vin na-eji mmanya na-acha ọbara ọbara mana n'ezie mmanya ọ bụla ga-eme! Echefukwala itinye ụfọdụ maka onye siri nri!
Akụrụngwa / Mgbanwe
Thkwụ apata ụkwụ na nchara na akpụkpọ ahụ nwere ezigbo ekpomeekpo! Enwere ike iji ara ọkụkọ mee oge mana oge nri nwere ike gbanwee ka ị ghara ịmịcha.
Mushrooms, yabasị, na carrots na-sauteed ruo mgbe juu.
Esi esi nri Coq au Vin
Soro usoro ndị a dị nro iji zuo oke ọkụkọ dị ụtọ na mmanya ihe ọ wineụ richụ bara ụba!
Akwukwo nri & Brown Chicken - wepụta onwe gị
Esi nri Veggies - ruo mgbe ọ dị nro wee tinye galik, mmanya na ihe ndị ọzọ.
Ime - tinye ọkụkọ azụ na pan wee kpuchie ya. Ime ruo mgbe obi, banyere 1 awa.
Mmanya maka Coq au Vin
Mmanya kachasị mma maka Coq au Vin bụ akụkọ ihe mere eme, mana n'ụzọ nkịtị, mmanya ọ bụla ga-eme.
Miri, burgundies gbara ọchịchịrị bụ mmanya kachasị amasị
Pinot Noirs ma ọ bụ Beaujolais dịkwa mma.
Ndi ocha di kwa nma mana na atu anya uto.
Echegbula onwe gị banyere ụgwọ, mmanya dị ọnụ ala dị ka ekpomeekpo na Coq au Vin dị ka ọnụ ọnụ ala!
Nri ndị mara mma
Braised Chicken Thigh with Mushrooms - ọkacha mmasị ezinụlọ
Easy Layered Ratatouille - efere otu ite
Ntụziaka Scrimpi Scrimpi dị mfe - ngwa ngwa ime
Broiled Lobster ọdụ - pụrụ iche kwesịrị
Okuko Cordon Bleu - cheesy & kemmiri ihe
Balsamic Pork Loin - marinated ruo mgbe obi
Love hụrụ efere Coq au Vin a n'anya? Jide n'aka na ị ga-ahapụ ọkwa na ikwu n'okpuru!
5site na10votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe35 Nkeji Oge nriotu aka elekere 35 Nkeji Oge zuru ezuabụọ awa 10 Nkeji Ọrụ4 servings Onye edemedeHolly Nilsson Coq au Vin bụ ihe mara mma nke nwere anụ ọkụkọ na ọkụkọ ọhụrụ, esi nri niile n'otu efere! Bipute Ntụtụ
▢8 Mpekere anụ ezi gbanwere
▢4 Ọkụkọ ọkụkọ ọkpụkpụ-na, akpụkpọ-on
▢4 ọkpọkọ ọkụkọ ọkpụkpụ-na, akpụkpọ-on
▢8 ounce cremini ero kpochara na sliced
▢otu buru ibu odo yabasị okpokoro
▢1 1/2 iko sliced ​​karọt
▢4 mkpụmkpụ galiki mebiri
▢otu ngaji mado tomato
▢abụọ tablespoons ntụ ọka
▢1 1/2 iko mmanya gbara ọkpụrụkpụ
▢1/2 iko anụ ngwaahịa ma ọ bụ ofe
▢4 sprigs ọhụrụ thyme
▢abụọ akọrọ n'ọnụ mmiri epupụta
Tinye anụ ezi na miri skimlet 12 ma ọ bụ braiser ma sie nri ruo mgbe ọ ga-esi. Wepu anụ ezi na akwa nhicha akwụkwọ. Hapụ anụ griiz na pan.
Tinye nnu na nnu na ose. Tinye ọkụkọ, akpụkpọ ahụ gbadaa ụkwụ, wee sie 5-6 nkeji kwa n'akụkụ ma ọ bụ ruo mgbe aja aja aja. Wepu ọkụkọ na pan ma tinye ya na efere.
N'otu pan tinye sliced ​​mushrooms, karọt, na yabasị ma sie nri ruo mgbe ero na eyịm malitere ime ka ọ dị nro, ihe dị ka nkeji 5.
Nwuo na garlic na mado tomato ma sie nri ruo mgbe keisi, ihe dị ka 1 nkeji. Wụsaa na ntụ ọka, nwuo ma sie otu nkeji ọzọ.
Tinye mmanya uhie uhie ntakịrị oge na-akpali akpali mgbe mgbakwunye ọ bụla ruo mgbe ị ga-eji ire ụtọ. Tinye anụ anụ, anụ ọhụrụ, ahịhịa, na ọkara anụ ezi. Ebido ikpokọta.
Tinye anụ ọkụkọ n'elu ngwakọta mmanya.
Kpuchie ya ekpuchi ma mee achịcha 30 nkeji. Kpughee ma mee ihe nkeji 30 ma ọ bụ ruo mgbe ọkụkọ ga-esi na ya ma ọ bụ ọlaedo.
Wepu ma tufuo akwukwo ahihia. Top na anụ ezi fọdụrụ ma jee ozi na poteto ma ọ bụ pasta.
Ọ bụrụ na ịnweghị braiser ma ọ bụ ite nwere ite, enwere ike ịkwadebe ya na skillet buru ibu ma wega ya na efere akpati. Enwere ike iji mkpụrụ osisi ọkụkọ ọ bụla (ya na ọkpụkpụ ya na anụ ya) mee ya. Mushrooms Cremini nwere ezigbo ekpomeekpo na anụ ụtọ ma enwere ike iji ya ma ọ bụ ero ọcha ma ọ bụ portobellos dochie ya.
Calorisị:Ogbe 624,Carbohydrates:18g,Protein:46g,Abụba:33g,Abụba Ajuju:10g,Cholesterol:213mg,Sodium:Ogbe 666mg,Potassium:1108mg,Eriri:3g,Sugar:5g,Vitamin A:8209IU,Vitamin C:8mg,Calcium:Ogbe 62mg,Iron:3mg
Isiokwukasị mma coq au vin, coq au vin, esi mee ka coq au vin N'ezieỌkụkọ, Nri abalị, Entree, Isi Agụmakwụkwọ Esie yaAmerican, FrenchEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .